Tag: valiny | Martech Zone
Ny tsy fahombiazan'ny martech stack anao hanompo ny mpanjifa
Alarobia 22, 2018 Eric Holtzclaw
Tamin'ny andro taloha tamin'ny marketing, tany am-piandohan'ny taona 2000, CMO be herim-po vitsivitsy no nanambola fitaovana tsy manara-penitra natao hanampiana hitantana tsara ny fampielezan-kevitr'izy ireo sy ny mpihaino azy. Ireo mpisava lalana mafy fo ireo dia nikasa ny handamina, hamakafaka ary hanatsara ny zava-bita, ary noho izany dia namorona ny rafitra fifangaroan'ny haitao marketing voalohany- izay nitondra filaminana, nanokatra fanentanana kendrena ary hafatra natokana ho an'ny vokatra tsara kokoa. Raha dinihina ny halaviran'ny indostrian'ny varotra tato anatin'ny taona vitsivitsy
Ny fiovana amin'ny tetibola marketing tamin'ny 2014
Talata, Febroary 18, 2014 Douglas Karr
Ny Econsultancy dia namoaka ny tatitra momba ny Tetibola momba ny Tetibola tamin'ny 2014 niaraka tamin'ny Responsys. Nanolotra an'ity sary feno ity momba ny valin'ny angona fanadihadiana izy ireo. Ireo mpivarotra (60%) dia mety hampisondrotra ny tetibola ara-barotra ankapobeny amin'ny taona mialoha noho ny amin'ny fotoana rehetra hatramin'ny nanombohan'ny tatitra momba ny Tetibola momba ny Marketing voalohany nandritra ny fotoanan'ny krizy ara-toekarena. Orinasa maherin'ny 600 (UK ny ankamaroany), no nandray anjara tamin'ity fikarohana ity, izay naka ny endrika
Tian'ireo mpanjifanao ve ianao? Ny angona fanadihadiana vaovao avy amin'ny Responsys dia manambara ny fomba ahafahan'ny marika mitazona fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa ary hisorohana ny fisarahana tsy ilaina. Ny fikarohana Responsys dia mampiseho fa ny mpanjifa dia milentika miaraka amina marika raha ny hafatr'izy ireo dia ao anatin'ny fanandramana mpanjifa voarindra izay mivelatra rehefa mandeha ny fotoana, manerana ny fantsona ary arakaraka ny fihetsiky ny olona sy ny tiany. Miaraka amin'ny paikady sy vahaolana mety, ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra dia mety ho fiandohan'ny kanto
Araka ny voalazan'ny Responsys 'SVP an'ny fantsom-pivoarana Michael Della Penna, amin'ny taona 2020 dia hisy fitaovana 75 miliara mifandray amin'ny Internet of Things. Tsy olona ity… ny tranontsika, ny fiara misy antsika, ny lampihazo misy antsika ary na ny fitaovantsika ara-pahasalamana aza dia samy mamolavola fampiharana finday sy takelaka feno miaraka amin'ny fampandrenesana fanosehana. Vao haingana ny valiny dia nanadihady momba ny varotra finday ho an'ny mpanjifa 1,200 amerikana ary nahita fa 68 isan-jaton'ny mpanjifa izay nampidina fampiharana no nahafahana nanery azy ireo.
AddShoppers: Sehatra fampiharana varotra sosialy
Talata, Septambra 24, 2013 Talata, Septambra 24, 2013 Douglas Karr
Ny fampiharana AddShoppers dia manampy anao hampisondrotra ny vola miditra ara-tsosialy, manampy bokotra fizarana ary hanome anao analytics momba ny fiantraikan'ny sosialy eo amin'ny varotra. AddShoppers dia manampy ny mpamatsy ecommerce hampiasa ny media sosialy hanao varotra bebe kokoa. Ny bokotra fizaran'izy ireo, valisoa ara-tsosialy ary fampiharana fizarana mividy dia manampy anao hanana fizarana sosialy bebe kokoa izay afaka mivadika ho varotra sosialy. AddShoppers analytics manampy anao hanaraka ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola ary hahafantatra hoe iza amin'ireo fantsona sosialy no miova. AddShoppers dia mampitombo ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fampidirana